Milaza Lainga Momba Ny Fifanakalozan-Kevitra Teo Amin’ny Governemanta Sy Ny Orinasa Mpitrandraka Volamena Fahatelo Lehibe Manerantany Ny Haino Aman-jery Tanzaniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jolay 2017 12:52 GMT
Ny filoha John Magufuli, faharoa avy any ankavia, miaraka amin'ireo mpitantana ny Barrick Gold tao amin'ny Lapam-panjakana, tamin'ny 14 Jona. Sary avy amin'ny Lapam-panjakana.
Niseho tao amin'ny Mtega.com, bilaogy manokan'i Ben Taylor, ny dika iray amin'ity lahatsoratra ity. Naverina navoaka eto indray ilay lahatsoratra rehefa nahazoana alàlana.
Ny 14 Jona, ny filoham-pirenena Tanzaniana John Magufuli dia nihaona tamin'i Jhon Thorton, filohan'ny Barrick Gold — orinasa mpitrandraka volamena lehibe indrindra erantany — izay nisidina avy any Amerika Avaratra ho amin'ilay tanjona. Nibahana tamin'ny lohateny lehibe tany Tanzania nandritra ny andro maromaro ny tatitra momba ilay fihaonana.
Ny momba ” ireo rihitra mineraly ” vokarin'ny rantsan'ny Barrick, Acacia Mining plc, any amin'ireo toerana telo fitrandrahany volamena any Tanzania no votoatin-dresaka. Tamin'ny 5 Martsa 2017, notànana mba hanaovana fanadihadiana ireo kaontenera maro nisy ireo rihitra mineraly ary nahato ny fanondranana. Nampangain'ny komity notendren'ny filoha hanatanteraka ny fanadihadiana ho nampihena be ny habetsaky ny volamena sy ireo mineraly hafa ao anatin'ireo rihitra mineraly haondrana ny Acacia Mining, ka tsy nahazoan'i Tanzania ireo volabe niditra — efa mahatratra ny tetibolam-panjakana telo taona.
Taitra ny Acacia sy ny Barrick, ary tsy nanaiky ny valin'ilay fanadihadian'ny komity, tamin'ny fanizingizinana fa voamarina sy vita fanambaràna ara-dalàna tsara ny entana haondrany, ary efa voaloa tamin'ny governemanta Tanzaniana avokoa ny hetra sy ny vola fandoa hahafahana mitrandraka sns. Herinandro vitsivitsy taty aoriana dia nantsoina hifanakalo hevitra amin'ny governemanta Tanzaniana ny Acacia ho fikaroham-bahaolana. (Atolotra ato amin’ity lahatsoratra ao amin'ny Bloomberg ity ny tatitra feno momba ilay olana).
Taorian'ny fiihaonana Magufuli-Thornton, navoakan'ny biraon'ny lapan'ny filoha ny lahatsary noraketina avy eo amin'ny zanatohatry ny Lapam-panjakàna izay anomezan'ireo lehilahy roa ireo ny fomba fijeriny ny zava-nisy nandritra ny fihaonana. Mba hanamaivànana ny tebitebinareo tamin'ny fijerena ilay lahatsary, dia inty ny famintinana : nisaoran'ny filoha i Thornton noho ny fahatongavany sy noho ny fanekeny handoa ny trosany . Thornton kosa nilaza fa faly ny orinasany afaka nifandinika ho famahàna ny fifandirana misy amin'izao fotoana izao, ary ho faly handoa ny totalim-bola izay takian'ny lalàna .
Misy fanampim-panambaràna mitovy amin'izany ihany navoakan'ny Lapam-panjakàna, milaza fa neken'ny Barrick ny handoa ny vola izay lazain'ny governemanta fa tsy maintsy efaina aminy.
Nolazain'ny filoha fa ankoatry ny fanekena handoa ny trosa amintsika, dia nanaiky ny hiaraka hiasa amin'i Tanzania hanangana ozinina fandrendrehana ao amin'ny firenena ny Prof John L. Thornton.
Raha ny filàzan'ny Barrick, dia toa ny hitohizan'ny fifanakalozan-kevitra no nifanarahana tao amin'ilay fivoriana, tsy anampiana tsy analàna. Tsy nisy ny marimaritra iraisana momba ny tontalin'ny trosa — raha misy— aloan'ny Acacia/Barrick amin'ny governemanta Tanzaniana, na ny anjara fandraisana andraikitry ny orinasa. Manohana io tsoakevitra io ny fanambaràna ôfisialy an-gazety nataon'ny governemanta momba ilay fihaonana, araka ny filàzan'i Thornton taorian'ilay fihaonana sy ny fanambaràna an-gazety farany tao amin'ny haba-tranonkalan'ny Acacia ary ny antso amin'ny fanavaozana ny tsena izay notontosaina ny marainan'ny 15 Jona.
Ny ampitson'ilay fihaonana, na izany aza, dia gazety Swahili enina no nitantara ilay fihaonana ho toy ny fandresena lehibe ho an'ny filoha sy ho an'i Tanzania, tamin'ny alàlan'izay nolazain'ny filoha momba ilay fivoriana. Nolazain'ny sasany aza fa nanaiky ny handoa izay takiana aminy ny Acacia/Barrick, na niaiky ry zareo fa nanao hadisoana, samy tsy hita taratra tamin'ilay tena fifanarahana vita izy roa ireo.
Avy any amin'ny ambony ankavia : Habari Leo, “manaiky ny hamarana ny raharaha ny Barrick”. Imani, “Henoy, ry tovolahy, tsy misy adala eto”. Majira, “Milefitra amin'ny governemanta ny Acacia”. Uhuru, “Mankatò baiko ny Acacia”. Nipashe, “Acacia handoa vola”. Mwananchi, “JPM: Nibebaka ry zareo”.
Lafiny hafa indray no noraisin'ny Gazety Swahili roa hafa, nifantoka kokoa tamin'ny olana voalaza ao amin'ny tapany faharoan'ny fanambaràn'ny Filoha Magufuli, izay nanamelohany ny fanaratsian'ny haino aman-jery ireo filoha teo aloha, Benjamin Mkpa sy Jakaya Kikwete tamin'ny fiampangàna azy ireo ho nanao baranahiny ny fanarahamaso ny sehatry ny harena an-kibon'ny tany.
“Samy novakiako ireo tatitra roa ireo ary tsy voalaza ao mihitsy ny hoe voarohirohy Atoa Mkapa sy Atoa Kikwete. Tokony hatsahatr'ireo haino aman-jery mpanome vaovao ny fandotoana ny anaran'ireo lehilahy roa izay nanao asa lehibe tamin'ny fanompoana ny fireneny ireo, tokony havela hisotro ronono amim-pilaminana ry zareo,” hoy ny Filoha Magufuli.
Avy any ankavia :Mawio, “sembana”. Tanzania Daima, “Tsy mahazo mikitkitika an'i Mkapa sy i Kikwete”.
Naaton'ny governemanta roa taona ilay gazetiboky kely mpiseho isan-kerinandro Mawio, izay nanao tsinontsinona ny antson'i Magufuli noho ny nampidirany ireo filoha roa teo aloha tamin'ilay fanafintohinana.
Malina kokoa ny fijerin'ireo gazety miteny Anglisy telo, saingy sarotra ny manaiky ny fihetsehampo voalaza ao amin'ny lohateny lehiben'ny The Guardian sy ny Daily News. ” Ho azo ve ny Fandresena ?” , “Miery ” ve Acacia ? Ny lohateny lehiben'ny The Citizen no akaiky kokoa ny zava-miseho marina, tahaka ny fandrakofam-baovaony amin'ny ankapobeny, indrindra fa ny lahatsoratra voalanjalanja sy am-pisainana, izay milaza fa :
Koa satria efa natao hifampiraharahana ny olana amin'izao fotoana izao, ny fivavakay dia mba hanao fifanarahana matotra ny andaniny sy ny ankilany, mifototra amin'ny fikasàna tsara ho amin'ny fiarahana mitondra vokatsoa. […]
Tombotsoan'ny roa tonta ny mahita marimaritra iraisana sy ny fiarovana ny samy mahazo, satria tsy te-hahita ity vato misakana ity hisoko ka ho lasa krizy handrava ny vokatra izahay.
Mpanao sariitatra maro no nandika vilana ilay zava-misy. Niala lavitra ny votoatin-dresaka ny Nipashe sy ny Mtanzania, tsy tafajanona tamin'ny votoatin-dresaka ny Mwananchi ary nampiasa sary mahery setra ny Daily News. Tsaratsara kokoa ny an'ny mpanao sariitatry ny The Citizen, fa làlan-kafa tanteraka noho ny an'ireo hafa rehetra no nizoran'i Gado izay tsy nanaparitaka taminà gazety ny sariitatra nataony .
Nipashe, 15/6/17: “'Ndao faranana ity ”.
Mwananchi, 15/6/17: “Azonareo ampiasaina ho toy ny zohy rehefa ny fotoanan'ny ady ity.
Mtanzania, 15/6/17: “Nekeny ny handoa vola ”.
Gado, 15/6/17: “Te-hihazakazaka ianao nefa tsy manana hisatra – inona no antenainao hiseho ? ”.
The Citizen, 15/6/17: “Tianay haverina aminay ny volanay”.
Fantatr'ireo mpanao gazety sy ireo tonian-dahatsoratra ve fa mamitaka ny vahoaka ry zareo ; raha fantany, nahoana no manao izany ry zareo ? Mety misy zavatra ifandraisany amin'ny lalàna izay nahatonga ny governemanta hampiato mora foana ny Mawio ve izany ? Mety matahotra ve ry zareo fa azo atao amin'ny hafa ihany koa izay nampiharina tamin'ny Mawio ? Ireo no fanontaniana manitikitika nateraky ny fahasamihafan'ny fandikàna nataon'ny haino aman-jery Tanzaniana ny vokatr'ilay fihaonana teo amin'i Magufuli sy Thornton .